भूकम्प मृतकका ३२ शव अझै अलपत्र, शव राखिएको ठाउँ पनि खोसियो – Health Post Nepal
भूकम्प मृतकका ३२ शव अझै अलपत्र, शव राखिएको ठाउँ पनि खोसियो
२०७५ असोज १६ गते १८:५०
जलाउन लागिएको शव प्रहरी नियन्त्रणमा
अस्पताल चहार्दा–चहार्दै ज्यान गयो, शव २४ घन्टादेखि एम्बुलेन्समा
१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएका मध्ये सनाखत हुन नसकेका ३२ वटा शव गाड्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ । सरकारले शव गाड्ने सुरक्षित ठाउँसमेत उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको छ ।
हालसम्म फरेन्सिक मेडिसिन विभाग महाराजगन्जमा सुरक्षित गाडिएका ती शव नयाँ भवन बनाउनका लागि त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने भएपछि फेरि समस्या उत्पन्न भएको हो । आफन्तहरू खोज्न आएमा दिन सकिने तथा डिएनए परीक्षण गरेर चिनिने गरी सुरक्षित रूपमा गाडेर राखिएको ठाउँमा नयाँ भवन बनेसँगै बेवारिसे शव राख्ने स्थानको अभाव भएको हो ।
सनाखत नभएका ३२ शवलाई विभागले आइओएमको खाली जग्गामा सुरक्षित गाडेको थियो । वर्षौंपछि पनि आफन्त खोज्न आए शव दिनुपर्ने भएकाले चिह्न लगाएर व्यवस्थित रूपमा गाडिएको थियो ।
यसअघि शव गाडिएको विभागअगाडिको खाली जग्गामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले करिब ६० करोड लागतमा ७ तलाको शैक्षिक भवन बनाउन थालेको छ । विभागका प्राध्यापक डा. हरिहर वस्तीले ३२ शवको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा ४२ वर्षदेखि आइओएमको उक्त जग्गामा शवको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।
अंग्रेजी अक्षरको एल आकार बनाएर प्रत्येक खाडल पाँच फिट गहिरो खनिएको छ । गाड्दा एक शवले अर्को शवलाई छोएको छैन । १६ शव ठाडो लाइनमा र १६ शव तेर्सो लाइनमा राखेर गाडिएको छ ।
फरेन्सिक विज्ञहरूका अनुसार भूकम्पमा मृत्यु भएकाको शव र बेवारिसे शव जलाउन मिल्दैन । केही समयअघि मात्रै दुई विदेशीको डिएनए रिपोर्ट मिलेको छ । तर, उनीहरू लिन आएका छैनन् ।
डा. वस्तीले शवको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘यी शव जलाउन मिल्दैन, कुनै पनि समयमा आफन्तहरू शव खोज्न आउँछन् । हामीले नमुना संकलन गरेर मिलेको खण्डमा दिन सकिने गरी चिह्न लगाएर गाडेका छौँ । अब भवन बन्ने भएपछि अलपत्र परेको छ ।’ भूकम्प गएको ११ महिनापछि अर्थात् ५ चैतमा ३२ शव व्यवस्थित रूपले गाडिएका हुन् ।
भूकम्पका ३२ शव जुनसुकै समयमा पनि निकाल्न मिल्ने गरी गाडिएका छन् । अंग्रेजी अक्षरको एल आकार बनाएर प्रत्येक खाडल पाँच फिट गहिरो खनिएको छ । गाड्दा एक शवले अर्को शवलाई छोएको छैन । १६ शव ठाडो लाइनमा र १६ शव तेर्सो लाइनमा राखेर गाडिएको छ । हरेक शवसँगै फलामको नम्बर प्लेट राखिएको छ । सहजै पहिचान गर्न जमिनमाथि पनि नम्बर प्लेट राखिएको छ । ‘३२ शवको छुट्टाछुट्टै डिएनए र औँठाछाप ल्याबबाट बनाएर सुरक्षित राखेका छौँ । साथै, कोड नम्बर राखेर व्यवस्थित रूपमा गाडेका छौँ,’ डा. वस्तीले भने, ‘कपडा, वर्ण, उचाइ, लिंग, कुनै औँलाको छापसहितका रेकर्डलाई प्रमाण मानिनेछ ।’
Tags: भूकम्प, शव